Iko Kukosha kweWheelchair Ongororo - Mazano & Ruzivo
Kwese kwaunotendeuka mazuva ano uchaona ongororo. Ruzhinji rwazvo ruri pa internet. Vanhu vazhinji vanoita zvisarudzo zvekutenga zvichibva pane wongororo idzi. Ivo vanofunga kuti ongororo idzi igwara mune chero sarudzo yekutenga yavanoita.
hwiricheya wongororo hadzina kusiyana nedzimwe ongororo. Ivo vanogona kukubatsira iwe kudzikisira pasi sarudzo dzako uye kukubatsira iwe kusarudza iyo yakanaka hwiricheya nekuda kwezvinangwa zvako. Izvi zvinogona kukusevha yakawanda nguva nemari paunenge uchitsvaga kune hwiricheya.
Kuwedzera Kuverenga, Merrier
Iwe unofanirwa kutarisa kuwongorora kwakawanda sezvaungagone kusanganisira iwo akanaka uye asina kunaka iwo. Izvi zvinokubatsira iwe kuti uwane unhu hwiricheya. Usakanganwa kubvunza nachiremba wako kana physio Therapist. Shamwari uye hama dzinogona kuve nekubatsira mune zvakare.
Kune nzira dzinoverengeka dzehunyanzvi dzekuwana dzakanaka hwiricheya wongororo. Iwe unofanirwa kutanga nekutsvaga pakati pe5 kusvika ku7 kunyatso kuongorora. Uku ndiko kutanga kwakanaka asi kuwanda kwakawanda kwaunoverenga iwe mukana uri nani wauchazowana wekutsvaga chako chakanakira hwiricheya.
Nyanzvi Ongororo Bata Rakawanda rehuremu
Iwe unozofanirwa kupfuura zvinongororwa zvega. Tarisa ongororo yehunyanzvi kubva kuvanhu vakaita zvidzidzo zvakadzama mumhando yako ye hwiricheya. Vachave neruzivo rwekuwedzera iwe rwaungasawana mune yako wega wongororo.
Iwe uchawana akawanda hwiricheya wongororo pamhepo. Kutsvaga wongororo kunowanzo kuve nyore pane kuwana chaiko hwiricheya. Tanga nekutarisa musoro wenyaya waunofunga kuti uchada. Ingo tsvaga neGoogle hwiricheya wongororo kuti iwe uende. Kana iwe wakadzora sarudzo yako chaiyo unogona kushandisa zita reiyo hwiricheya + ongorora kuti unyatso tsvaga kutsvaga kwako.
hwiricheya Mugadziri Wongororo
Mawebhusaiti ayo anotengesa chaizvo hwiricheya kazhinji vane wongororo zvakare. Iwe uchafanirwa kutarisa ongororo idzi nepfungwa dzakashama sezvo ivo vari kutengesa iyo hwiricheya uye kazhinji zvinongoisa wongororo dzakanaka. Tenga iyo info yakaunganidzwa ichabatsira kana uchitarisa yako yekupedzisira sarudzo.
Kuongorora kwakazvimirira kunogara kuri kwakanyanya, iwo ariko muongorori asina hukama nemutengesi. Iwe uchafanirwa kutora iyo sarudzo pane ongororo kuti uongorore hwaro. Ingo chengeta mupfungwa kuti kana iwe uri kuverenga wongororo kubva kune saiti inotengesa mavhiripu, vari kuita nepavanogona napo kusimudzira iyo hwiricheya nenzira yakanaka.
Ingo tora iyo info iwe yaunonzwa kuti inonyanya kukosha woisa zvese pamwe chete kana uchiita yako yekupedzisira kutenga sarudzo.